Ampitomboana izay mampiombona | NewsMada
Ampitomboana izay mampiombona
Taona vaovao izao. Arahabaina ny isan-tokantrano sy ny tsirairay. Mbola velona aina finaritra hifanatitra amin’ny fianakaviana, hifanasoa amin’ny mpiara-belona. Inona ny vaovao? Ny tarehimarika amin’ny tetiandro. Eo koa ny hoe mitombo indray ny taona ivelomana, na mihena ihany koa…
Zava-dehibe ny fahavelomana, asiana dikany sy lanja ary hararaotina mandrakariva. Natao hiara-monina ny olombelona: aleo miara-monina, miady. Toy izay mitoka-monina any Ankaratra. Velon-kifanasoa ihany koa izy, hifanampy. Hifameno fa tsy hifamono, na eo aza ny fahasamihafana.
Talaky maso sy misongadina avy hatrany ary saika mibahan-toerana izay fahasamihafana izay: roritina, mampiady, mampisaraka… Tsy mba amin’ny hoe fifamenoana. Anisan’ny fototra sy fositra tsy mampiray ny samy Malagasy amin’ny fiaraha-miatrika ny fampandrosoana izay?
Tenenin-dava ny hoe fihavanana, fa tsy hita be ihany. Hany ka lasa fomba fiteny ankehitriny ny hoe: ny vazaha, mody miady; fa ny Malagasy, mody mihavana. Saika mibahan-toerana hatrany na tsy takona afenina tsinona izay maha samy hafa izay, na itoviana sy mety iraisana aza ny fihavanana.
Na tsy hita soritra na tsy manan-danja intsony izay iombonana sy mampiombona: ny tany, ny teny, ny tena… samy Malagasy. Difotry ny fahantrana, ny fitiavan-tena, ny adilahy politika, ny zarazarao hanjakan’ny sasany… ? Na ahoana na ahoana, be lavitra ny mampiombona noho izay maha samy hafa.
Harembe ny fahasamihafana, raha hay ny mampifameno azy. Sao tsy olana politika sy toekarena no tena fositra, fa ny kolontsaina sy toe-tsaina enti-miatrika izany? Miforitra amin’ny fahantrana, dia mangataka sy mitrosa lava; tsy matoky tena sy tsy miray hina, dia miantehitra amin’ny vahiny…
Fotoana famitranam-pihavanana izao tonon-taona izao, fandravonana izay tsy mampitovy na mampiady. Aleo ampitomboana izay mampiombona, fa tsy izay mampisaraka. Na firehan-kevitra io, na toerana, na fiaviana… Mby aiza? Mila fahasahiana, fanapahan-kevitra, fiaraha-mihetsika amin’izay…